Nhau - Iyo skrini inodzivirira inobatsira iwe !!!
Chii chako kunzwa kana skrini yako yakamenywa uye kutyorwa kana mbozhanhare yadonha pasi ?? Uchaita sei ipapo?
1. Ungafunga here kushandisa USD800-1000 kutenga imwe nharembozha? Kunyanya iyo yekutanga foni inongova kambani newe chete hafu kana gore rimwe chete?
2. Kana kushandisa USD60-100 kugadzirisa kana kushandura nharembozha?
Nekuvandudzwa kwetekinoroji, iyo smartphone kana zvimwe zvishandiso zvakaungana zvekubata skrini sechikamu chenguva dzose. Izvo hazvishande zvakanaka kana iyo skrini ikatyoka kana kubata kwekubata kwakaipa mushure mekukweshwa.
Nepo iwo masikirini akagwinya kupfuura zvavaimboita, ivo vachiri kugona kutsigira kutsemuka uye kukwenya. Kukuvara kwefoni kunowanzo kuve mutengo wekushandisa kwemazuva ese. Zvinogona kuitika kana uchirohwa kana kumanikidzwa kwakanyanya pachiratidziro chako, kana iwe unogona kuwana kutsemuka pamidziyo mushure mekudonhedza netsaona. Tsaona dzinoitika kana iwe ukatakura mudziyo kuenda kwese kwaunoenda.
Kana iwe usiri kuda kuwana mamwe matambudziko uye mutengo, iyo nzira yehungwaru iri kuwana dziviriro yechidzitiro chemidziyo. Anogara achidzivirira screen inowanzo kuita pakati pe $ 10 ne $ 20, uye ichave yakanaka mari.
Munhu wepakati anoda muchengeti wechidzitiro kumidziyo yavo? Kubatsira kwechidzitiro chekudzivirira ndechekuti inopa yakawedzera inishuwarenzi kana paitika tsaona. Unogona kukwenya chinovhara chinodzivirira wochitsiva nemutengo wakaderera.
Pakupedzisira, zviri kwauri kuti usarudze kana uchida muchengeti wechidzitiro. Zvichienderana nemamiriro ako ezvinhu, inogona kunge iri smart kutenga - kunyanya kana uchishaya mari yekutsiva kana kugadzirisa iyo skrini zvese kamwechete.
Nekuvandudzwa kwescreen dziviriro, kune mamwe marudzi emabasa akaitika pagirazi rakatetepa, kana zvimwe zvinhu zvakaita se PMMA, PET nezvimwewo senge anti bhuruu mwenje, anti-kupenya, kuvanzika, anti mabhakitiriya, nezvimwe. gadzira yakadzikama firimu kana skrini inodzivirira inokodzera futi Nhare mbozha, Pad, piritsi, laptop, smartwatch, enda pro, kamera, uye lens ye iPhone, Samsung, Google, Huawei, Mi, Vivo, Oppo, Motorola, nhema shark. , nezvimwewo uye skrini inodzivirira mota, muchina, nezvimwe.
Post nguva: Mar-13-2021